Akwukwo Biodegradable, Bowl, Cup - ZHONGSHENG
Ngwa ahia ZZ Eco 5-Compartments nri ehihie 12.5 ″…
Ngwaahịa ZZ Eco TAN Fiber Trays- 6 ″ X 6 ...
ya mere họrọ anyị
nabata n’ụlọ ọrụ anyị
Jinhua zhongsheng Fiber Products Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na-emeputa ihe nke na-ejikọta mpempe akwụkwọ akụrụngwapụta ngwaahịa & azụmaahịa na imewe ihe na mmepe. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ ọkụ anyị na-emepụta dị mma maka ụdị ọrụ dị iche iche na igwe dị iche iche nke usoro kpo oku (kpo oku, kpo oku, kpo oku mmanụ ọkụ). Anyị na-ebute ụzọ na nyocha na n'ichepụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ndị a na-ewe site na steams na mmanụ na-ebufe okpomọkụ. A na-akwalitela teknụzụ na-azọpụta ume ebe a, na-arụkwa ya n'ụlọ na ná mba ọzọ.
E guzobere Zhongsheng Group na 2004. Na mbido mbụ, Zhongsheng bụ ọkachamara na imewe, mmepe, n'ichepụta na ire ahịa ịkpụzi akụrụngwa na akwa ndị pụrụ iche, wee were 70% ahịa China na-akpụzi ụlọ ọrụ nwere teknụzụ nke ihe ndị na-akpụzi alịmịnụ, akpaaka. ịdọ aka na nnukwu igwe.
Site na ịrị elu ahịa chọrọ maka tebụl akwụkwọ biodegradable, a guzobere Jinhua Zhongsheng Fiber Products Co., Ltd na 2013 wee malite itinye aka na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ biodegradable.